जुत्ता, कपडा, टायर उद्योग यसरी चल्नसक्छ
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायको युनिफर्म, जुत्ता, सरकारी गाडीमा चाहिने टायर अनिवार्य रुपमा नेपाली नै प्रयोग गर्नुपर्ने नीति बनाउने हो भने जुत्ता, कपडा, धागो, टायर कारखाना आरामले चल्छ । विदेशी बजार गुल्जार गर्न स्वदेशी उद्योग बन्द गराउने हो भने परनिर्भरता कसरी कम हुन्छ र ?
लाखौं रोजगारी र तिनमा आश्रित लाखौं परिवारजनका लागि सरकारले आत्मनिर्भरताको यो नीति किन लागू नगर्ने ? हाइड्रोमा आफ्नै लगानीको सोच आउनसक्छ भने स्वदेशी कपडा, स्वदेशी जुत्ता र स्वदेशी टायरको प्रयोग किन हुनसक्दैन ? सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गराउन सक्छु भन्ने इच्छाशक्ति छ ? छ भने देखिनुपर्छ ।
मान्छे निकासी गरेर रेमिटान्सले देश चलिरहेको छ । यो परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ र शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैका समान पहुँच पु¥याउनु पर्छ, अन्यथा सर्वहाराको फुइँकी नेकपा हाइकमाण्डमात्र सिमित हुनेछ । लुट कान्छा लुटको गीत अरु घन्किनेछ । माफियाले सरकार नै चलाइदिनेछ ।